जेलबाट यस्तो सन्देश बालकृष्ण ढुंगेलले नेकपा महासचिव विप्लवलाई पठाए , के भने विप्लवले ? – Complete Nepali News Portal
जेलबाट यस्तो सन्देश बालकृष्ण ढुंगेलले नेकपा महासचिव विप्लवलाई पठाए , के भने विप्लवले ?
November 15, 2017	2,883 Views
जनयुद्धकालिन मुद्दामा जेल चलान भएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढंगेलले पहिलोपटक जेलबाट एउटा सन्देश छोडेको छन् ।
सहकर्मीहरु चुनावी मैदानमा होमिएका बेला आफु भने जेलको कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका ढुंगेलले सन्देश पठाएपछि माओवादी केन्द्रको ध्यान यता पनि केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
“ढुंगलेजीले आफूले विप्लवलाई सम्झिरहेको बताउनुभयो। आफूले सम्झिरहेको कुरा विप्लवलाई भनिदिन समेत भन्नुभएको छ” बालकृष्णका शुभचिन्तकले भने ।
तर ढुंगेलले चुनावी प्रचारमा लागेका अन्य नेताहरुको बारेमा केही नसोधेको समेत उनले बताए ।
उनलाई अदालतको अनुमतिपछि जेल चलान गरिएको हो । अदालतका अनुसार ढुंगेल १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन जेल बस्नु पर्नेछ ।
८ बर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई एक द्वन्द्वकालीन हत्यामा दोषी ठहर्राएको थियो । ढुंगेलले यस घटनामा आफु निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन् ।
ढुंगेललाई पक्राउ गरेको विरोधमा नेकपाले १६ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन समेत गर्यो ।
भण्डारीका अनुसार न्यायप्रशासन ऐन– २०७३ ले कानुनी व्यवस्थामा त्रुटि भएको वा तथ्यमा त्रुटि भएको विषयमा पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ढुंगेलले जेलबाट पठाएको सन्देशबारे महासचिव विप्लवले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । (इमान्दारमिडिया)